Kwandile ukukokotela - Ilanga News
Home Izindaba Kwandile ukukokotela
Kuthiwa umculo weJoyous Celebration ‘kuphiswana ngawo’ kakhulu
Kubaphuca isinkwa abaculi abafana noMthunzi Namba noLindelani Mkhi-ze abayingxenye yeJoyous Celebration njengoba kuvela eyokwanda komkhuba wokukokotelwa komculo.
IGCIWANE iCovid-19 ligadla ngokweqile kubaculi bakuleli abahamba phambili njengoba senyuka isibalo sokukokotelwa komculo ngalesi sikhathi sokuvalwa kokusebenza kwezwe ukunqanda ukubhebhetheka kwalesi sifo.
Lokhu kuvezwe yinhlangano yomculo kuleli, iRecording Industry of South Africa (RISA) ekhala ngokuhlukumezeka abaculi abahlangabezana nakho ngalesi sikhathi.
UNhlanhla Sibisi oyisikhulu esiphezulu kule nhlangano, uveze ukuthi njengoba iningi labantu livaleleke amakhaya ngalesi sikhathi, lisebenzisa umculo ukuchitha isikhathi nokuziduduza.
Uthe asebekutholile njengenhlangano yomculo, wukuthi njengoba ziziningi izindlela zokuthola umculo online nje, iningi lazo kalikho emthethweni njengoba bengahlomuli lutho abaculi kwezinye zalezi zindlela.
“Zikhona izindlela zokuthola umculo ezisemthethweni futhi ezikwaziyo ukuhlomulisa abaculi ngokuthengwa komculo wabo online,” esho. Uthi kuyiqiniso elingeke liphikwe ukuthi abaculi balimalile ngokuvala kokusebe-nza kwezwe.
“Manje bathembele ekudayi-sweni komculo wabo kodwa kubuhlungu ukuthi kwalona lelo themba liyalimala njengoba sesithole ukuthi abantu kabasebenzisi izindlela eziqondile zokuthola umculo,” kusho uSibisi.
Uqhube ngokubala izingoma ezikokotelwa kakhulu ngalesi si-khathi. Kulezi zingoma kubalwa kuzo Emcimbini kaKabza de Small, iLove Letter yeBlaq Diamond, iTender Love kaSha Sha, Umlilo kaDJ Zinhle, Jerusalema kaMaster KG noNomcebo nezinye.
Uphinde waveza ne-album entsha yeqembu lomculo wowokholo iJoyous Celebration akhale ngokuthi izingoma ezitholakala kuyona abantu bathumelelana zona ngoWhatsApp.
“Uma abantu bethumelelana izingoma ngoWhatsApp kuyabalimaza abaculi ngoba kakukho abakutholayo ngalokhu,”esho.
Unxuse abathandi bomculo ukuba basebenzise izindlela eziqondile zokuthola umculo. Ubale izinkundla zokuthola umculo eziqondile okubalwa kuzo iVodacom My Muze, i-Apple Music, iSpotify, iGoogle Play Music, iTi-dal, iJoox, iSimfy Africa, iDeezer ne-You Tube Music.
Previous articleKuzohlahlwa indlela ngekusasa lezemfundo
Next articleWashada isinyenyela uthisha obulawe ‘yindoda nenyanga’